Shirka madaxda Soomaaliya oo maanta loo ballansan yahay | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka madaxda Soomaaliya oo maanta loo ballansan yahay
Waxaa maanta loo ballansan yahay qabsoomidda shirka wadatashiga madaxda Soomaaliya ay ku yeelanayaan teendhada Afisyooni.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa dhawaan la filyaa in kulan u dhexeeya Madaxda Dowladda Fadaraalka ee waqtigu ka dhamaaday iyo kuwa Maamul Goboleedyada ay kulan ku yeeshaan Magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta ku taalla aagga aadka loo ilaaliyo ee Xalane.
Kulankaan oo qorshuhu ahaa inuu dhaco Talaadadii, ayaa dib u dhacay, kadib safar uu Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoor-qoor’ ugu ambabaxay Dhuusamareeb galinkii danbe ee Isniinta.
Shirkaan oo Wakiillada Beesha caalamka ee Soomaaliya qaban qaabiyeen ayaa looga hadlayaa ajandaha shir madaxeedka la doonayo in lagu saxiixo hannaanka kama dambeysta ah ee doorashooyinka dalka.
Guud ahaan Madaxda Maamullada ayaa hadda ku sugan Muqdisho, kadib markii uu shalay dib ugu soo laabtay caasimadda Axmed Qoor-qoor, oo wax ka yar 24 saac ku maqnaa Galgaduud.
Kadib kulamadii dhacay 3-dii iyo 4tii bishaan, oo aan isfahan muuqda laga gaarin tabashooyinka jira, waxaa la rajeynayaa in shirkaan si weyn loo gorfeeyo caqabadaha taagan, si dalka loogu jeheeyo doorasho la isla oggol yahay.